ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး (၆)ထပ်တိုးချဲ့ဆောင်သစ်ဖွင့်လှစ်၊ အဆောင်သစ်တွင် နှလုံးရောဂါသည်ကလေးင? - Yangon Media Group
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး (၆)ထပ်တိုးချဲ့ဆောင်သစ်ဖွင့်လှစ်၊ အဆောင်သစ်တွင် နှလုံးရောဂါသည်ကလေးင?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ – ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး (၆)ထပ်တိုးချဲ့ဆောင်သစ် (Cardiac Complex) ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားကိုစက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် တွင် အဆိုပါဆေးရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ခုတင် ၁ဝဝ ဆံ့သောအဆောင်သစ် ကြီးတွင် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနေ သော ကလေးငယ်များကိုအဓိက ထား၍ ခွဲစိတ်ကုသပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကျန်း မာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်း ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက် တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦး ဇော်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ”ဒီနေရာမှာထည့် ပြောလိုတာက ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ အား ကစားဝန်ကြီးဌာနက အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁ဘီယီယံဒေါ် လာ (သန်းပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်) လောက်ရတယ်။ တကယ့်တကယ် တော့ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် ရင် အလွန်နည်းပါတယ်။ သို့သော် လည်း ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကိုသေသေချာ ချာစိစစ်ပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီး သည် ခုတင် ၅၅ဝ ဆံ့ဆေးရုံကြီး ဖြစ်ပြီးယခု ခြောက်ထပ်ဆောင် သစ်တွင်ခုတင် ၁ဝဝ ဆံ့အဆောင် ဖြစ်သောကြောင့် ကုတင် ၆၅ဝ ဆံ့ သော ဆေးရုံဖြစ်ကာလူနာများကို ပိုမိုလက်ခံ၍ကုသပေးနိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
‘ဒီအဆောက်အအုံကြီးမှာ နှလုံးရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေး ငယ်တွေကိုအဓိကထား ကုသပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါခံစား နေရတဲ့လူကြီးအချို့လည်း ကုသ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆောင် သစ်မှာစုစုပေါင်းခုတင် ၁ဝဝခန့် ရှိပါတယ်။ ဒီရန်ကင်းကလေးဆေး ရုံကြီးမှာကလေးနှလုံးခွဲစိတ်ကုသ ခြင်းကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလက စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတစ် နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မွေးရာပါ နှလုံး ရောဂါက လေးများကို ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝင်းဝင်းကျော်၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မောင်ဦး၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအေးအေးတို့ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ အောင်မြင် စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဆိုရင် အခု ခြောက်နှစ်တာကာလအတွင်း က လေးရော၊ လူကြီးပါ နှလုံးခွဲစိတ်မှု ပေါင်း ၂၂ဝဝ ဦးခန့်ရှိပြီဖြစ် ပါတယ်” ဟု ရန်ကင်းကလေးဆေး ရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင် က အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး (၆)ထပ်တိုးချဲ့ဆောင်သစ်၏ မြေ ညီထပ်တွင်နှလုံးခွဲစိတ်မည့် ပြင်ပ လူနာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးဌာန၊ ဓာတ် မှန်ဌာနများ၊ပထမထပ်တွင် ခွဲစိတ် ခန်းနှစ်ခန်း၊ ဒုတိယထပ်တွင်ခွဲ စိတ်ကုသပြီး ကြပ်မတ်ဆောင် (ခုတင်၁၈ဆံ့)၊ တတိယထပ်တွင် ကလေးများ အထူးကြတ်မတ် ဆောင် (၃၈ ခုတင်ဆံ့)၊ စတုတ္ထထပ် တွင် နှလုံးနှင့် သွေးကြောခွဲစိတ်ကု အဆောင်(၄၄ ခုတင်ဆံ့)၊ ပဉ္စမထပ် တွင် ဓာတ်ခွဲနှင့်သွေးလှူဌာနများထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။
”အရင်အဆောက်အအုံ ဟောင်းမှာ ခွဲစိတ်ခန်းမှာ တစ်နေ့ မှာ နှစ်ယောက်လောက်ပဲခွဲနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံ သစ်မှာဆိုရင်တော့ လေးဦးခန့်ခွဲနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကဆက် လက်ပြောသည်။
နှလုံးရောဂါကြောင့်မဖြစ် မနေခွဲစိတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေရသူ ၃ဝဝကျော်ခန့်ရှိကြောင်းနှင့် ယခု အဆောင်သစ်ရှိလာပြီဖြစ်သည့် အတွက်ကုသပေးရန် အခွင့်အ လမ်းများ ပိုများလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး တင်သွင်းသည့် ဝန်ကြီးချုပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်က ခန့်ထားနိုင်ရေး ဥပဒေ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းသည့် အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အင်းဝမြေဝိုင်း အကအဖ